Umvelisi kunye noMboneleli wevenkile ethengisa izinto zomthi |Ikamva
Uluhlu lwethu olutsha lokusika amaplanga lolwala maxesha, lustic, isitayile kwaye lomelele - lulungele ukutya okushushu nokubandayo.Ezi mela zinobuhlobo nendalo ngoko ke zilungile kumashishini ajonge ukuthoba indawo yawo yekhabhoni.
Ezi zitshixo zomthi zenziwe kwi-Birchwood.Lo ngumthombo ohlaziyekayo kunye nozinzileyo oxhaphakileyo kubonelelo lwehlabathi.Le mathiriyeli ekrwada isetyenziselwa ukusika kwethu amaplanga njengoko ibonelela ukuba yomelele kwaye yomelele, kunye nokuba nesiphelo esithambileyo kunye nokuziva okugudileyo kumthengi wakho.I-Birchwood yaziwa ngokuba nemiphetho emincinci ejijekileyo, ke ngoko ikhuselekile ngokugqibeleleyo ukuyitya nayo.
Isigaxa sethu somthi we-birch esenziwe kakuhle sisitayile, esifikelelekayo, esilungele i-eco-friendly ukukhetha ipikiniki yakho elandelayo, iofisi okanye itheko lesidlo sangokuhlwa, umsitho okhethekileyo, umtshato, okanye ikhefi okanye indawo yokutyela!
Iiplanga zethu zokusika ziya kuthomalalisa kwaye aziyi kungcolisa okanye zonakalise indalo esingqongileyo.
Enye indlela enkulu kwiplasitiki elahlayo yokusika.Iindlela eziye zanceda uluntu, izilwanyana zasendle kunye nemekobume.
WK160 Imela yomthi 160mm 1000(10*100pcs)
WF160 Ifolokhwe yomthi 160mm 1000(10*100pcs)
WS160 Icephe lomthi 160mm 1000(10*100pcs)
WSPK160 Inyama yenkomo yomthi 160mm 1000(10*100pcs)
WSPK105 Icephe elincinci lomthi 105mm 2000pcs
WS105 Inyamakazi encinci yomthi 105mm 2000pcs
· Yenziwe ngomthi we-birch, izibonelelo ezivuselelekayo
· Custom embossing ekhoyo
Ukhetho oluninzi kunye nolusongelweyo (isisongelo sinokuprintwa okanye singaprintwa)
· Ibakala lokutya liyahambelana
Ngaphambili: CPLA Cutlery Kits
Okulandelayo: Wooden Cutlery Kit